पशु क्वारेन्टाईन स्थापना हुने « Anumodan National Daily
पशु क्वारेन्टाईन स्थापना हुने
प्रकाशित मिति : १० जेष्ठ २०७४, बुधबार ०५:४२
टीकापुर । नेपाल–भारत सीमा नाका खक्रौलामा पशु क्वारेन्टाईन चेक पोष्ट स्थापना हुने भएको छ ।
केन्द्रीय पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय काठमाडौंले कार्यालय स्थापनाको आवश्यकता अध्ययनका लागि एक टोली खटाएको छ । जिल्ला पशुसेवा कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख डा. मदनसिाह धामी नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अध्ययन पश्चात विभिन्न सरोकारवाला निकायसाग छलफल समेत गरेको छ ।
टोलीले टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघसँग समेत सोमबार कार्यालय स्थापनाको महत्त्वका बारेमा छलफल गरेको छ । संघले क्यारेन्टाईन चेक पोष्ट स्थापनाका लागि विगत लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको छ । साविक नारायणपुर गाविस सत्तीमा रहेको चेक पोष्ट द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएको थियो । सोही कार्यालय खक्रौलामा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने संघको माग रहेको छ ।
संघका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छलफल कार्यक्रममा चेक पोष्ट पुनस्र्थापनाका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउने निर्णय समेत भएको छ । चेक पोष्ट स्थापनाले पशु र पशुजन्य पदार्थ आयात निर्यातमा सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
छलफलमा पशु हाटबजार व्यवस्थापन समिति टीकापुरका अध्यक्ष बीरबहादुर बटालाले क्वारेन्टाईन चेक पोष्ट नहुँदा समस्या भइरहेको बताए । उनले भारतबाट आयात हुने पशु चोरी बाटोबाट ल्याउन किसान वाध्य भएको बताए ।
उनले पशु हाटबजारमा करिब एक सय भन्दा बढी पशुचौपाया भारतबाट आउने गरेको दावी गरे । उनले क्वारेन्टाईन चेक पोष्टको अभावमा यकिन तथ्यांक नभएको जनाए ।
‘हामीसँग क्वारेन्टाईन चेक पोष्ट छैन’ उनले भने– ‘त्यसैले यति नै पशुचौपाया भित्रिने गरेको छ भन्न गाह्रो छ ।’
द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएको चेक पोष्ट धनगढी सारिएको छ । यस सीमा नाकाबाट पशु र पशुजन्य पदार्थको कारोवार गर्नेहरूले क्वारेन्टाईन चेकका लागि धनगढी जानुपर्ने बाध्यता छ । खक्रौला नाकाबाट धनगढी करिब सवा सय किलोमिटर दुरीमा छ । धनगढी जान नसक्नेहरूले लुकिछिपी पशु र पशुजन्य पदार्थ भित्र्याउने गरेको पाइएको छ ।
उन्नत गाईपालन श्रोत केन्द्रका अध्यक्ष चक्र बटालाले क्वारेन्टाईन नहुँदा पशुचौपाया भित्र्याउन मात्रै नभई दाना भित्र्याउन समेत समस्या भइरहेको बताए । उनले नेपालमा उत्पादन भएको दाना निकै महंगो हुने गरेको गुनासो गरे ।
‘क्वारेन्टाईन कार्यालय भयो भने दाना भित्र्याउन सहज हुनेछ’ उनले भने– ‘दानामा मात्रै हाम्रो व्ययभार कम हुनेछ ।’
छलफलमा टीकापुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत बालाराम शर्माले क्वारेन्टाईन कार्यालय स्थापनाका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले नगरपालिकाले किसानका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
टोली प्रमुख डा. धामीले सरोकारवालाको सल्लाह सुझाव अनुसार केन्द्रमा प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए । उनले स्थलगत अध्ययनका क्रममा कार्यालय स्थापनामा खाशै कठिनाई नभएको पाइएको बताए ।
‘तत्कालीन समयमा सत्तीमा रहेको कार्यालयकै दरबन्दी अनुसार अघि बढ्न सकिन्छ’ उनले भने– ‘यसका खाशै ठूलो समस्या छैन ।’
पशु क्वारेन्टाईन चेक पोष्ट स्थापना भए पशुपंक्षी तथा पशुजन्य पदार्थ चोरी निकासीमा कमी आउने विश्वास गरिएको छ ।